FIFA oo magdhow ka bixinaysa dhaawaca Riccardo Montolivo! (Sidee?) – Gool FM
(Zurich) 07 Okt 2016 – AC Milan ayaa laga yaabaa inay magdhow ka hesho xiriiirka caalamiga ah ee FIFA kaddib markii uu xalay ka dhaawcmay Riccardo Montolivo oo waajib qaran ugu jirey Talyaaniga.
Waxaa horraantii maanta la xaqiiyay in laacibka khadka dhexe uu seedaha jilbaha wax ka noqday, waana dhaawac ugu yaraan u baahan inuu 6 bilood garoomada ka maqnaado.
Marka la eego Xeerka Dhowrista Naadiyada ee (FIFA’s Club Protection), waxay xiriirkan ku waajibinaysaa inay bixiyaan gunnada laacib kasta oo ku dhaawacma ciyaaro caalami ah, gaar ahaan haddii uu maqnaado wax ka badan 28 maalmood.
Taas ayaa ka dhigan, sida aad loo filayo, inuu xiriirku khasnadda Milan ku shubo €7.5m oo euro, taasoo lagu bixin doono ugu badnaan 365 maalmood gudohood, waxayna ku salaysan tahay mushaharka uu laacibku kooxdiisa ka qaato.